पछिल्लो समयमा यसरी भैरहेको छ राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग ! « Surya Khabar
पछिल्लो समयमा यसरी भैरहेको छ राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग !
काठमाण्डौ । सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको छ।
शनिबारको गोरखापत्रमा लेखिएको छ, संविधानको धारा ८ र अनुसूची – १ ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाबारे विशेष व्यवस्था गरेका छन्। कतै पनि गौरवमयी नेपालको झन्डा उल्लेख पाइँदैन। अधिवक्ता पोखरेलले गौरवमयी झन्डालाई संविधानले नचिन्ने यस कार्यले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको बताए।